Niditra an-tsehatra tamin'ny laharana 50 manerantany i Bogotá araka ny International Congress and Convention Association
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kolombia » Niditra an-tsehatra tamin'ny laharana 50 manerantany i Bogotá araka ny International Congress and Convention Association
Bogotá dia nifindra ho laharana faha-14 tamin'ny tatitra International Association and Convention Association (ICCA) tamin'ity taona ity. Miakatra toerana 14 mankany 45th.Ny tanàna ihany koa dia nanana mpanatrika betsaka indrindra amin'ny hetsika any amin'ny faritra, miaraka amina olona 52,868. Ity valiny tsara ity dia mialoha ny toerana fihaonan'ny Amerikanina Tatsimo mandray ny BestCities Global Forum isan-taona amin'ny faran'ity taona ity.
Ny Best City Alliance dia manaiky an'i Houston sy Vancouver, izay nanao hetsika lehibe tao amin'ilay tatitra, nihanika toerana 38 hatramin'ny 148th ary toerana 16 mankany 39th tsirairay avy. Ny laharana nohatsaraina ho an'ireo tanàna telo dia mipetraka miaraka amin'ny fahombiazan'ny mpiara-miombon'antoka BestCities hafa; Berlin (4th), Singapore (6th) sy Madrid (7th), izay samy nanamafy ny toerany ao anatin'ny 10 voalohany, mitazona ny toerana misy azy ireo hatramin'ny 2016.
Raha miresaka ny fahombiazan'ny mpiara-miasa aminy, Paul Vallee, mpitantana ny BestCities dia nilaza hoe:
“Mahafinaritra ny mahita mpiara-miombon'antoka be dia be manao tsara amin'ny tatitra ICCA 2017. Amin'ny maha tambajotra iraisampirenena ny biraon'ny fivoriamben'ny distrika 12 manerantany, ireo vokatra ireo dia manampy amin'ny fanamafisana ny fifampiraharahana iraisana amin'ny fiombonambe iraisam-pirenena ary ny fiangaviana hitsidika ny toerana aleha.
"Miaraka amin'ny fivoriana mitotaly 1,072 natokana tamin'ny taona 2017, ny fiaraha-miombon'antoka dia tsy manome na kely aza ny tsara indrindra ho an'ireo fikambanana kilasy eran-tany, isan-taona.
“Faly izahay mahita an'i Bogotá mitsambikina toerana 14 amin'ny taona hampiantranoan'izy ireo ny Global Forum. Toy ny mahazatra dia miezaka izahay manampy ny mpanjifa maro kokoa hamorona fiantraikany misy lanjany sy maharitra amin'ny indostria ary manantena ny lohahevitra amin'ity taona ity, Ny Herin'ny Vahoaka, hahafahantsika manatratra izany amin'ny sehatra vaovao. ”
Jorge Mario Díaz avy ao amin'ny Birao Fifanarahana Greater Bogotá dia nilaza hoe:
“Ny birao fivoriamben'ny distrika Greater Bogotá dia niezaka nampiroborobo ny indostrian'ny hetsika ary ny fanekena ny ezaka ataon'ny tanàna amin'ny laharam-pahamehana ICCA dia fahombiazana lehibe amin'ny paikady napetraka sy porofon'ny asa mafy nataon'ny ekipa.
“Ity valiny ity dia mampiseho ny fahombiazan'ny paikadin'ny varotra ao an-tanàna sy ny fanintona ireo hetsika izay natombokay telo taona lasa izay, notarihin'ny Chambre de Commerce, ny Birao Fifanarahana Greater Bogotá ary ny Governemanta eo an-toerana.
“I Bogotá dia toeran-tany isan-karazany sy eklektika izay afaka manatrika fihaonan'ny fikambanana marobe.
“Amin'ity taona ity dia faly izahay hampiantrano ny BestCites Global Forum ary manantena ny handray ireo tanàna mpiara-miasa sy solontena hankalazana anay, Ny Herin'ny Vahoaka. Mahatsapa izahay fa ity hetsika ity dia tena hisongadin'ity taona ity ho an'i Bogotá. ”
PACTO ao amin'ny IMEX: Fa maninona ny fivoriana, famporisihana, fivoriambe ary fampirantiana (MICE) any Indonezia dia natao ho an'ny PACTO?